टिमुरको अन्वेषणमा सात वर्ष : ‘फुच्चे मास्टर’ को खोज | enews off
Home अन्तराष्ट्रिय टिमुरको अन्वेषणमा सात वर्ष : ‘फुच्चे मास्टर’ को खोज
बहुउपयोगी कच्चा जडिबुटी बेच्दै औषधिमा अरुको भर पर्ने देशका नागरिक हौं हामी । यो बिडम्बनापूर्ण अवस्थाका बीच अच्युतले कच्चा औषधिबाट नै गम्भीर किसिमको रोग पत्ता लगाउनसक्ने विषयको खोजी गरे । र, धेरै जडिबुटीमा रहेको रासायनिक पदार्थ दुनियाँलाई चिनाए ।
यद्यपि, हजुरआमाको त्यो दक्षताबारे उनलाई अहिले पनि कौतुहलता जाग्ने गर्छ । आखिर पहिलेका मानिसहरुले कसरी यस्तो रोग पत्ता लगाउँथे ? जसमा साइड इफेक्टको कुरै थिएन भने निको हुँदैन कि भन्ने पनि शंका पनि थिएन ।
ती दुई घटना
सानै हुँदा अच्युतलाई एकपटक दाँतको दुखाईले सतायो । गाउँको नामुद आयुर्वेदका ज्ञाता ‘चापै ठूल्बा’ कहाँ पुगे । त्यतिबेला ठूल्बाले के बुटी दिए कुन्नी दुखाई निमिट्यान्न भयो । त्यसयता अहिलेसम्म आफूलाई कहिल्यै दाँतको समस्या नभएको उनी बताउँछन् ।
तर, ठूल्बाको त्यो विद्या उनको मृत्युसँगै विलायो । त्यसपछि गाउँमा कसैले पनि त्यो विद्या सिक्न सकेनन् । यसप्रकार ज्ञानको अभावमा बहुमूल्य आयुर्वेदिक औषधिहरुको लोप हुने चिन्ताले गर्दा नै आफू नेपालको आयुर्वेदिक औषधिहरुको खोजीतर्फ मोडिएको बताउँछन् डा. अधिकारी ।
Previous articleपार्टीभित्र एकताको विकल्प छैन : देउवा
Next articleजब समर्थकले पारस खड्काको खुट्टा छोए …